Home Wararka Imaaraadka oo gafkii ugu danbeeysay ka galaya Soomaaliya & Natiijo xumada ka...
Imaaraadka oo gafkii ugu danbeeysay ka galaya Soomaaliya & Natiijo xumada ka dhalan karta
Muse Cilmi Indhayare (Muse Dhere)
Sadaxdii doorasho ee isaga danbeeysay dalka Soomaaliya, Dowlada Imaaraadka Carabta waxa ay taageertay musharaxiin khalad ah taas oo keentay in shacabka Soomaaliyeed u qaadaan shacabka iyo hogaanka dalka Imaaraadka Carabta naceyb iyo cuqdo ku saleeysan aragtida qaldan ee ay Imaaraadka Carabta ka qabaan dalka Soomaaliya.
Labada dal ee Imaaraadka Carabta iyo dalka Soomaaliya waxa ka dhaxeeya xiriir taariikhi ah oo boqolaal sano soo jiray. Xiriirka labada dal ma ahaynin mid ku saleysan siyaasad oo kali ah laakiin waxaa ay ahayd mid salka ku heysa saaxiibtinimo, walaaltinimo iyo dareen gaar oo ka dhaxeeyay labada umaddood.
Umadda Soomaaliyeed waxa ay u arki jireenShiikh Zayid bin Sultan Al Nahyan in uu ahaa aabaha labada dal ee Imaaraadk iyo Soomaaliya. Shiikh Zayid waxa dalka Soomaaliya laga siiyay beero iyo guryo. Siyaaada labada dal waxa ay ahayd mid midaysan. Labada dal waxa ay lahaayeen siyaasad mideysan oo ku wajahan arimaha caalamka iyo tan Bariga Dhexe.
Nasiib xumo sideedii sano ee la soo dhaafay dowlada Imaaraadka Carabta waxa ay qaadatay siyaasad qaldan oo salka ku heysa dano gaar ah kuwaas oo keenay in Dowlada Imaaraadka Carabta iyo dalka Soomaaliya ay ku kala tagaaan. Doorka imaaraadku kula lahaa Soomaaliyana waxaa qaatay wadamo kale sida Turkiga iyo Qatar.
Madaxda Imaaraadka ayaa qaatay aragti siyaasadeed oo aad u qaldan, waxa ayna rumeysan yihiin, kuna qanacsan yihiin in dalka Soomaaliya ay ka talin karaan oo kali ah hal beel oo kamida beelaha dega Soomaaliya. Waxa ay rumeysan yihiin in hogaanka dalka Soomaaliya loo dhiibo shaqsi ka soo jeedo beesha Majeerteen, gaar ahaan beesha Maxamuud Saleeman.
Safiirka Imaaraadka Carabta ee fadhigiisu yahay magalaada Muqdisho ayaa sheegay in isaga iyo dowladiisa ay ka go’an tahay in dalka Soomaaliya madaxweyne uga dhigaan qof ka soo jeeda beesha Majeerteen ah. “ walaahi, yacni, to tell you the truth, Majeerteen kaliya ayaa danaha aan ka leenahay Soomaaliya ku aamini karnaa, khalaas” ayuu yiri isaga oo ay ka muuqato caaadifad gaar ah.
Imaaraadku Carabta waxa ay dhaqaale ku bixiyeen sadax musharax in ay dalka Soomaaliya ka noqdaan madaxweyne kuwaas oo kala ah; Cumar Cabdirashiid, Cabdiwali Gaas iyo hada oo ay dhaqaale iyo taageero siyaasadeed siinayaan Musharax Saciid Cabdullahi Deni.
Dhamaan musharaxiintii ay taageereen waa ay ku fashilmeen in ay gaaraan hamigooda siyaasadeed, waxa ayna taas keentay, in shacabka Soomaaliyeed ay cadaawad taariikhi ah u qaadaan shacabka iyo hogaanka dalka Imaaraadka Carabta. Nasiib xumo, waxaa wali muuqata in ay ku adkeeysanayaan in ay dalka Soomaaliya u dhibaan hogaan ay iyagu u soo xuleen, kana tarjumaya danooda kooban ee gaarka ah.
Hadaba markii ay soo ifbaxday in Imaaraadku Carabta gadaal ka riixayaan Musharax Saciid Cabdullahi Deni, waxaa guud dalka ka bilaawaday dagaal lagu qaaday Musharaxnimadiisa, taas oo keentay in siyaasada ahaan uu dhinto iyadaga oo aanba la gaarin xiligii doorashada.
Beesha Majeerteen xaq bay u leedahay in dalka Hogaamiyaan, horayna waa ay u soo hogaamiyeen, laakiin waxa ay shacabka Soomaaliyeed marnaba qaadan karin in la dul dhigo hogaan aan ka tarjumeynin danaha dalka iyo dadka.
Hadaba Su’aalaha isweydiinta mudan ayaa ah Imaaradku Carabta ma ku adkeeysan doonaan dariiqii ay horay ugu soo fashilmeen kuna lumiyeen qadiyadii iyo saaxibtinimadii soo jireenka ahayd ee kala dhaxeeysay dalka iyo dadka Soomaaliyeed? Mise caqli ka duwan kii hore ayay la imaan doonaan.
Naceeybka loo qabo Imaaradka Carabta iyo siyaasadooda qaldan ee kuwajahan Soomaaliya ayaa keeni karta in dib loo soo doorto Madaxeynaha waqtiisa dhaamaday ee Farmaajo. Sida hada ka muuqata siyaasadda Imaaraadka ee kuwajahan Soomaaliya, waxa ay gali doonaan gafkii ugu danbeeyay ay ka galaan shacabka iyo jiritaanka qaranimda Soomaaliya.
Talada ugu fiican oo ay Imaaraadka qaadan karaan waxa ay tahay in ay faraha kala baxaan siyaasada Soomaaliya, mar hadii ay lumiyeen karamadii , dhex-dhexaadnidmaii ay ku dhex lahaayeen shacabka Soomaaliyeed.
W/Q: Muse Cilmi Indhayare (Muse Dhere)
Muse Cilmi Indhayare (Muse Dhere) - September 18, 2021
Muse Cilmi Indhayare (Muse Dhere) - September 17, 2021